Shacabka Sweden kuma qanacsana soo galootiga | Somaliska
Sida lagu soo bandhigay afti ururin ay samaysay shirkada Novus inta badan shacabka Sweden kuma qanacsana siyaasada ku aadan soo galootiga. Dadka wareysiga laga qaaday ayaa 80% muujiyay in aysan ku qanacsanayn sida ay dowladu u maamushay siyaasada soo galootiga, taasoo qaasatan ku aadan tirada soo galootiga wadanka imaanaya iyo xaalada isdhexgalka ee kuwa ku nool Sweden.
Afti kale oo ay samaysay SIFO ayaa sidoo kale muujisay in 50% shacabka Sweden ay doonayaan in xisbiyada siyaasada ay la shaqeeyaan xisbiga cunsuriga ah ee SD qaasatan arimaha ay isku aragtida ka yihiin. Arintaas ayaa muujinaysa in dadka Swedishka ay caadi ka dhigeen xisbiga SD isla markaana ay sii kordheyso tirada dadka Swedishka ah ee ku fikirka ah SD.
Guud ahaan cunsuriyada, iyo aragtida xun ee laga qabo soo galootiga iyo qaxootiga ayaa u muuqata mid ku sii fidaysa Sweden oo lagu yaqaanay wadan furan oo soo dhaweyn fiican. Xisbiyada kale sida Moderaterna (M) ayaa bilaabay in ay raacaan wadada SD oo ay soo bandhigaan qorshayaal lagu yaraynayo soo galootiga.
Waxaa laga cabsi qabaa in Sweden ay sanadaha soo socda la mid noqoto Denmark oo halkaasi ay dhamaan xisbiyada siyaasadu wada noqdeen kuwo ka soo horjeeda soo galootiga.
Maalinbo waxaad rabto miyaad noo sheegee dhoor bil ka hor waxaad soo qorte shacabka sweden ayaa yurub oo dhan ugu horeeyo oo arimaha soo galootiga maantane waxaad leedahay 80 % madoonayaan soo galootiga kkk birina armaad soo qortaa 90% wexee doonayaan siyaasada soo galootiga
July 1, 2015 at 02:18
Waxa ladiidan yahay waa dadka ka imaanaya, dunida cunsuriyadu taalo, tusaale: yahuud iyo nasaara nacaybka oo kale.
Sida carabta Iyo muslim oodhanba, waayo awal lama ogeyn, qofka muslimka fikirkiisa Iyo fikradihiisa, Laakiin hada waxaa lasoo ogaanayaa, siyaasada Umadda muslimkaa ay kaqabaan dadka aan ahayn muslimka. Waynu ognahay waxa aynu ka aamin sanahay, dadka aan ahayn muslimka. Sidaas darteed waxaa soo badanaya nacaybka looqabo muslimka, khaasatan dumarka ayay dhibweyn ugeysanaysaa,
Maadaamaa dharka ay dhibku uga imaanayo dharka. Klädkod Ayaa looyaqaan, ama kläders sätt.
soomaali kaliya ma sheegaayaane adigu soomaalida sawiradooda iyag iyo caruurda maxaa u soo saartay adaaba soomaalida ku shidaayee qaxooti ma soomaali kaliya ayaa ah.
Wadan ka England waxaa Wada tukanaya oo salaada kuqaybsanaya hal hall oo weyn. Yahuuda iyo Somalida. Marka hadii yahuuda iyo Somalida UK ay wada heshiyeen,
Waxaan umalaynayaa somali waa soo ilbaxayaan. Awal waxaan necbayn yahuuda iyo nasaara. Maanta laakiin wax weyn ayaan soo fahmaynaa.
Dadka soo galootigaa waxa lagu nacayaa waa islamtinimada. Sidooda kale lama diidana.
Ururka haysta Danmark iyo SD maahan isku taariikh. SD waxay ka soo jeedaan ururkii la odhan jirey Nanziga ee Hitler uu kaabaha u ahaa. Laakiin partiga Denmark waa uu ka duwan yahay. isku soo wada duube, waxa la nacay waa muslimka maahan shaqsiga. inagu waxaan nahay dadka ugu liita afrika oo waxaa ina liida cidwalba.
Waxaa ina dhaama dadka kale, Sida Ethiopianka, Eritreanka iyo Gambianka.